राष्ट्रपतिज्यू, हात नलम्काइबक्सियोस्, राजनीति गर्ने हो भने शीतलनिवास छाडिबक्सियोस् - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
राष्ट्रपतिज्यू, हात नलम्काइबक्सियोस्, राजनीति गर्ने हो भने शीतलनिवास छाडिबक्सियोस्
२०७७ श्रावण ८, बिहीबार ०६:३२:००
काठमाडाैँ-मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्सियोस् महाराज । हात नलम्काइबक्सियोस् । आँखा नचम्काइबक्सियोस् । आफ्ना सुण्ड मसुुण्ड नचलाइबक्सियोस् । सुण्ड मुसण्ड चलाउने नै हो भने श्रीपेच उतारेर चुनावी मैदानमा आउनुपर्यो ।
भर्खर जारी भएको २०४७ को संविधानले तोकेको सीमा र मर्यादालाई सम्झाउँदै मदन भण्डारीले टुँडीखेलबाट यो हुंकार गरेको पनि तीन दशक हुन लागेको छ ।
यतिखेर मदन भण्डारी हाम्रासामु छैनन् । संयोगवश उनकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको राष्ट्रप्रमुख छन् ।
राष्ट्रप्रमुखका रुपमा २०४७ को संविधानले राजालाई दिएभन्दा बढी अधिकार अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलार्ई पनि दिएको छैन ।
बरु विगतमा राजाले जुनजुन धाराको व्याख्या, अपव्याख्या र प्रयोग, दुरुपयोग गरेर शक्ति अभ्यास गरेका थिए, तिनलाई पनि अहिले सीमित गरिएको छ । धेरै हदसम्म आलंकारिक भूमिका दिइएको छ ।
तर, अहिले शीतलनिवासका गतिविधि नियाल्ने हो भने त्यसलाई मुलुकको संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको कार्यालय हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन ।
बरु सत्तारुढ नेकपाको मुख्यालय धुम्वाराही सुनसान छ । संसदीय दलमा ठूला नेता भेट्न मुस्किल छ । यी दुवै कार्यालयमा त्यहाँ भेटिनुपर्ने प्रायः नेताकार्यकर्ताका बैठक, भेला र भोजभतेर शीतलनिवासमा हुन थालेका छन् ।
शीतलनिवासमा शिष्टाचार बैठक र भेला मात्र भइरहेका छैनन् । सत्ताको जोडघटाउ समेत चल्न थालेको छ । कोको मिल्ने, ककसलाई मिलाउने, ककसलाई उचाल्ने, ककसलाई पछार्ने सबै निर्णय राष्ट्रप्रमुखको कार्यालयका छलफलबाट हुन थालेका छन् ।
राज्यका हरेक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बजेटमा शीतलनिवासको भाग छुट्याउनु सामान्य भइसकेको छ ।
के नेकपामा ओली दाहाल सहमति भाँडिएकै हो त ?
राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अभिभावकत्व देखाउने ठाउँ अरु नै छन् । समाजमा त्यक्त वर्गका प्रतिनिधिसँग उनले हेलमेल र सम्मानभाव प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।
मुलुकका मूर्धन्य प्रतिभाहरुलाई उनले भेट्दा हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिसँग उनले आत्मीयता प्रदर्शन गर्न सक्छन् । त्यसले राष्ट्रप्रमुखप्रति सबै समुदायको अपनत्व र सम्मानभाव बढ्न सक्छ ।
महामारी, युद्ध, विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद तथा अन्य मञ्चहरुमा असाधारण क्षमता प्रदर्शन गर्ने नेपालीलाई ढाडस दिन सक्छन् । देशको यशोवृद्धि गर्न बाह्य जगतमा योगदान गर्नेहरुसँग उनले समय बिताउन सक्छन् । तर, भण्डारी शीतलनिवास प्रवेश गरेयता यसतर्फ खासै रुचि देखाएको पाइँदैन ।
देशको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय प्राथमिकता र संवैधानिक मर्यादालाई बारम्बार अवमूल्यन भएका घटना भने प्रशस्तै छन् । यस्तै एउटा उदाहरण हो, जापान जाँदा म्यानमारको बाटो रोज्नु ।
जहाँ रोहिंग्या समुदायमाथिको अत्याचारका कारण म्यानमार संसारबाट आलोचित छ । रोहिंग्याको ठूलो समूह नेपालमा शरण लिएर बसेको छ ।
ती दीनहीन र निःसहाय रोहिंग्याको पीडालाई नदेखेजस्तो गरी आङसाङ सुकी सरकारका मानव अधिकारविरोधी हर्कतलाई वैधता प्रदान गर्न नेपालको राष्ट्रप्रमुख जानु मानव अधिकारकै खिल्ली उडाउनुसरह थियो ।
अमेरिकी सरकारले नै नचिन्ने भ्रमण गर्न उनी सरकारी खर्चमा अमेरिका पुगिन् । त्यस्तै अन्य मुलुकमा पनि उनले प्राथमिकता र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर घुमफिर गरिन् ।
एउटा व्यापारीको लिफ्ट उद्घाटन गर्न पोखरा पुग्नु पनि राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादाको अवमूल्यन नै थियो । हुँदाहुँदा अहिले नेकपाभित्रको रडाकोलाई लिएर शीतलनिवास विवादको घेरामा परेको छ । सत्तारुढ दलकै एक अध्यक्ष भन्दै छन्, शीतलनिवास लगेर मलाई परिबन्दमा पारियो ।
सुन्दा सामान्य लागे पनि पुष्पकमल दाहालको यो अभिव्यक्ति सामान्य छैन । विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा शीतलनिवासले के त्यस्तो भूमिका खेल्दै छ, जहाँ एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, सांसदहरुको पनि नेता जो प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिइरहेका छन् र उनले आफूलाई राष्ट्रप्रमुखको निवासमा लगेर परिबन्दमा पारिएको अभिव्यक्ति दिँदै छन् ?
के मुलुकको राष्ट्रपतिलाई यस्ता विवादमा मुछ्न हुन्छ ? यसतिर कसैले ध्यान पुर्याएको छ ?
राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन् । यतिखेर नेपाली सेनालाई अब विस्तारै सिंहदरबारप्रति मोहभंग भएको आभास हुँदै छ । रक्षामन्त्रीका कतिपय गतिविधि मन नपरेपछि प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर गुनासो गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामान खरिदका क्रममा जी टू जी प्रक्रियाका नाममा जुन नाटक मञ्चन गरियो, त्यसबाट पनि सेनाको नेतृत्व बेचैन छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले थालेको सेनाभित्रको सुुशासन अभियानमै दाग लाग्ने गरी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाको लोगो जसरी दुरुपयोग गरे, त्यसप्रति सेनाले आपत्ति जनाइसकेको छ ।
मन्त्रीप्रति सेनाको अविश्वाससम्म त ठीकै छ । प्रधानमन्त्रीलाई यथार्थ जानकारी गराएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रियाबाट पछि हट्नु पनि स्वाभाविक छ । तर सिंहदरकारका पात्र र चरित्रहरु मन पर्न छाडेर बिस्तारै सेनाको झुकाव र लगाव शीतलनिवासतिर बढ्दै जाने हो भने अर्को जोखिमपूर्ण परिस्थिति बन्न सक्छ ।
अहिले सबैतिर नेकपाकै नेताहरुको उपस्थिति हुँदा शक्तिको प्रयोगमा दोहोरोपना कम देखिएको होला । भोलि केपी ओलीको ठाउँमा अरु कोही प्रधानमन्त्री आउँदा शीतलनिवास र सिंहदरबार दोहोरो शक्तिकेन्द्र बन्ने खतरा छ । त्यतिखेर सेनाले जुन शक्तिलाई साथ दिन्छ, त्यही नै प्रभावी हुनेछ ।
नागरिक नियन्त्रणको कुरा केवल संविधानका पानामा सीमित हुनेछ । ईश्वर पोखरेलको ठाउँमा रामबहादुर थापा हुँदा मात्र पनि स्थिति बेग्लै हुन सक्छ ।
रामवरण यादव राष्ट्रपति छँदा पनि उनले संवैधानिक हैसियत र दायरा ननाघेका होइनन् । सेनापति प्रकरण, केही विधेयक रोक्ने निर्णय र कांग्रेस महाधिवेशनमा उनले मर्यादा नाघेर अतिरिक्त सक्रियता देखाएका थिए ।
खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउनुुअघि उनले आफ्ना तर्फबाट मन्त्री हुने व्यक्तिका नाममा सर्तनामा गराएका थिए । पछि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन नहुने रिटको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकै दिन सर्वोच्च अदालत नखुल्दै शपथ दिलाएर शक्तिको व्यापक प्रयोग गरेका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनको सल्लाहकार टिम परिपक्व थियो । धेरै हदसम्म उक्त टिमले क्षति न्यूनीकरण गरेको थियो । त्यही कारण उक्त संस्थालाई सबैको बनाउने प्रयास गरेको पाइन्थ्यो ।
देशभित्र र बाहिर भ्रमणमा जाँदा भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेता एवं प्रतिनिधि सामेल गरिएको पाइन्थ्यो । केकस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने वा नजाने भन्ने मापदण्ड अपनाइएको थियो । ती असल अभ्यास र विरासतलाई समेत अहिले धूूलीसात् पारिएको छ ।
संस्थामा रहनेहरु स्वयंले संस्थाको मर्यादा नराखिदिए अरुले जति नै चिन्ता गरे पनि अर्थहीन भइदिन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व, पश्चिम, सम्पन्न, विपन्न, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको अभिभावक र संविधानको पालक एवं संरक्षक हुनुपर्ने संस्थालाई एउटा दल, त्यसभित्रको पनि गुटको स्वार्थभित्र ठिँगुर्‍याइएको छ ।
जुन सर्वथा अनुचित र आपत्तिजनक छ । स्वयं राष्ट्रपति संस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्थापकै निम्ति घातक छ । यथाशीघ्र यो संस्थालाई सक्नु छ भने त यस्तै गतिविधि थप बढाए भइहाल्यो । होइन भने पदमा रहने र त्यो पदमा पुर्‍याउनेहरुले एकपटक मनन् गर्ने हो कि ?
मदन भण्डारीका माथि उद्धृत अभिव्यक्तिको अरुले ख्याल नगरे पनि कम्तीमा उनका अनुयायी र धर्मपत्नीले एकपटक मनन गरिदिने हो कि ? यदि सक्रिय राजनीतिमै लाग्ने, पार्टीभित्रकै संघर्षमा रमाउने हो भने शीतलनिवास छाडेर मैदानमा उत्रिने हो कि ?